नेपालमा पहिलो पटक कोरोना सङ्क्रमितलाई रेम्डिसिभिर औषधि दिइयो ! यस्तो देखियो अ’सर – – Life Nepali
नेपालमा पहिलो पटक कोरोना सङ्क्रमितलाई रेम्डिसिभिर औषधि दिइयो ! यस्तो देखियो अ’सर –
नेपालगञ्ज । कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल रेम्डिसिभिर औषधि पश्चिम नेपालमै पहिलो पटक बाँकेमा एक ग’म्भीर सङ्क्रमितलाई दिइएको छ । सोमबारबाट पहिलो पटक यहाँस्थित भेरी अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापीमार्फत सङ्क्रमितको उपचार शुरु गरिएकोमा मङ्गलबार पहिलो पटक नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित एकजना गम्भीर बिरामीलाई एन्टिभाइरल रेम्डिसिभिर औषधि दिएर उपचार शुरु गरेको हो । *** पूरा भिडियो हेर्न यहीँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
यस क्षेत्रमै पहिलो पटक सङ्क्रमित ग’म्भीर बि’रामीलाई रेमडिसिभिर औषधि दिएको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले जनाएको छ । शिक्षण अस्पताल कोहलपुरका सहायक निर्देशक डा। दिनेश श्रेष्ठले सोमबार अस्पतालमा भर्ना भएका कैलाली धनगढीस्थित विशालनगरका ४८ वर्षीय सङ्क्रमित पुरुषलाई एन्टिभाइरल रेमडिसिभिर औषधि दिइएको बताउनुभयो ।
उहाँले अस्पतालका फिजिसियन डा. श्याम विकको नेतृत्वमा डा.सन्देश पण्डितसहितको टीमले सङ्क्रमितलाई पहिलो भाइल औषधि दिइएको जनाउनुभयो । नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. आसिम किदवाईसमेत ती सङ्क्रमित बिरामीको उपचारमा खटिँदैआउनुभएको छ ।
कोहलपुर अस्पतालका फिजिसियन डा। विकले सङ्क्रमितलाई पहिलो भाइल दिइएको जानकारी गराउँदै बि’रामीको अवस्था हेरेर थप भाइल दिने वा प्लाज्मा दिने भन्ने निर्णय गरिने बताउनुभयो । उहाँले प्लाज्मा थेरापी उपचारका लागि पनि सबै तयारी पूरा गरेको जनाउँदै त्यसका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगञ्जका कर अधिकृत खडानन्द पाण्डेले मङ्गलबार रगत प्रदान गर्नुभएको बताउनुभयो ।
सामान्य औषधि उपचार र अक्सिजनले नभ्याएपछि आइसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने कोरोना सङ्क्रमितलाई रेमडिसिभिर औषधि दिइने गरिएको चिकित्सकले जनाएका छन् । यसअघि सोमबार बाँकेमा पहिलो पटक प्लाज्मा थेरापीको शुरुवात गर्दै भेरी अस्पतालमा रहेका सल्यानका एक गम्भीर सङ्क्रमितलाई प्लाज्मा दिइएको थियो । पहिलो प्लाज्मा नेपालगञ्ज वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष प्रमोद रिजालले डोनेट गर्नुभएको थियो । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
Previous काठमाडौ उपत्यकाका लागि सरकारबाट आयो महत्वपुर्ण सूचना !
Next नेपालमा कोरोना संक्रमित बढ्नै क्रम अझै रोकिएन, आज मात्रै देखिए यति धेरै संक्रमित !